Tsy fiandaniana amin’ny fifidianana: tsy mahafa-bela ny fanahiana ny HCC | NewsMada
“Ahiahy no mipetraka amin’iny… Fa hanao ny asanay araka ny tokony ho izy izahay, raha fifidianana no resahina. Tsy lojika raha mangataka hoe hiaro ny tsy fiandanin’ny fanjakana io governemanta io izahay, nefa izahay indray ve no hanondrana?”
“Raha tsy miara-kametraka hoe tena fifidianana no hatao eto amin’ny firenena isika, tsy ho vita io. Tsy hifampitifitra sy hifampiahiahy fotsiny no atao eto”, hoy izy.
Tsy efa hita ve ny nafitsoky ny HCC nandritra izao fitondrana izao? Izay no tsy mahafa-bela azy amin’ny ahiahy. Vitavita ho azy, ohatra, ny kolikoly maharikoriko nataon’ny fitondrana tamin’ny fifidianana loholona, 29 desambra 2015. Niaky ny fanitsakitsahana ny tsimbaratelon’ny latsa-bato ny HCC. Misy marika tsy fanao amin’ny biletà tokana, fa lasa fantatra izay nifidy, “Nisy toromarika izany tany ambadika tany”, hoy izy tamin’izany.